एमाले-माके एकता बैशाख ९ मा पनि नहुने पक्कापक्की जस्तै, यी हुन् चार बाधक — OnlineDabali
Posted on April 12, 2018 by अनलाइन डबली
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुने भनिएको एकता बैशाख ९ गते नहुने सम्भावना बढेको छ । नेताहरुले विभिन्न ठाउँमा पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहे पनि महत्वपूर्ण कुरामा सहमति हुन बाँकी छ ।
एमाले नेता सुवास नेम्वाङले पूर्व पुगेर सबै कुरा मिलिसकेको बताएको केही घण्टामै उपाध्यक्ष भीम रावलले धेरै कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताए । काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले बैशाख ९ गते एकता हुनेबारे कुनै निर्णय नभएको समेत बताए । उनले नेताहरुको व्यवस्थापनमा पनि कुरा नमिलेको दाबी गरे । यसअघि नेताहरुले आफूहरुको व्यवस्थापन ठूलो नभएको बताउँदै आएका थिए ।
कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर बैशाख ९ मा पार्टी एकता गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माके अध्यक्ष प्रचण्डबीच यसअघि मोटामोटी सहमति भएको थियो । तर, अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन ढिलो तयार भएकै कारण केही विषयमा सहमति हुन नसकेको बताइन्छ ।
बैशाख ९ मा एकताको लागि बाधक मानिएका चार विषयः
१. चुनाव चिन्हः एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह के हुने भन्नेमै दुबै पार्टीका नेताहरुले आ–आफ्ना अडान छोडेका छैनन् । एमाले नेताहरुले सूर्य नै चुनाव चिन्ह हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने माकेका नेताहरुले सूर्यभित्र हसियाँ हथौडा हुनुपर्ने बताएका छन् । सूर्य चिन्ह भए एकता नभएर पार्टी प्रवेश गरेजस्तै हुने भनाई छ भने चुनावअघि प्रचण्डले सूर्य चिन्ह स्वीकार गरिसकेका कारण यसमा दायाँबायाँ नहुने एमाले नेताहरुको धारणा छ ।
२. जनयुद्धः जनयुद्ध शब्द पनि एकताको लागि बाधक भएको छ । प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्नुपर्ने माकेका नेताहरुका माग छ भने यो कुरा एमालेले स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिमा सहमति हुन नसक्दा यो विषय ओली र प्रचण्डसमक्षमा पठाइएको छ तर सहमति हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको आन्तिरक छलफलमा पनि माओवादीले १० वर्षसम्म चलाएको जनयुद्ध नभएको बताउँदै ‘जनयुद्ध’ शब्दले एकीकृत पार्टीमा कुनै स्थान नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
यसैगरी माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि जनयुद्धलाई एमालेले स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटिनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उनीहरुले जनयुद्ध शब्द नसमेट्दा माओवादी एमालेमा विलय हुने अर्थ लाग्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
३. बाराबरीः अर्को महत्वपूर्ण कुरा संगठनमा बराबरीको कुरा हो । माओवादी केन्द्रले पछिल्लो पटक संगठनमा बराबरीको नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । चुनाव र सरकार निर्माणमा करिब करिब ६०÷४० र ७०÷३० स्वीकार गरेको माकेले पार्टी संगठनमा भने बराबरी मागेको हो । यो प्रस्ताव एमालेको लागि मान्य हुने कुरै छैन । उसले आफू ७० र माके ३० प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
पार्टी निकट विद्यार्थीको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले बराबरी नभए पार्टी एकता नै हुँदैन समेत भनेका थिए । त्यसैगरी बालुवाटारमा ओलीले आफू निटक नेताहरुसँगको छलफलमा बरु एकता हुँदैन तर एमालेको हैसियत माओवादीलाई दिन नसकिने बताएका थिए ।
४. प्रधानमन्त्रीको व्यवहारः प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि राम्रो व्यवहार नगरेको माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले पार्टीमा रिर्पोटिङ गरिसकेका छन् । भारत भ्रमण, सचिव सरुवा हुँदै दैनिक काम कारवाहीमा आफूहरुमाथि प्रधानमन्त्रीले अपमानजनक व्यवहार गरेको भन्दै माकेका मन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गुहार गरिसकेका छन् । यो व्यवहारिक पाटो भएपनि कहिले कही महत्वपूर्ण भएर आउँछ । यसले अन्तरघुलमा अवरोध गर्छ ।
चुनाव चिन्ह, जनयुद्ध शब्द राजनीतिक हुन् भने बराबरी सांगठानिक । त्यसैगरी ओलीको व्यवहार भावनात्मक वा व्यवहारिक पक्ष ।राजनीति, संगठन र भावनात्मक कुरामै एक मत भइनसकेको अवस्थामा बैशाख ९ गते नै पार्टी एकता भइहाल्नेमा प्रश्न खडा भएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा रातारात ठूलो परिवर्तन भएको धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले एमाले र माकेका नेताहरुबीच फेरिपनि रातारात सहमति नहोला भन्न सकिदैन । तर, सबै नेताहरुको व्यवस्तालाई हेर्दा पार्टी एकताको विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ । त्यसैगरी दुबै पार्टीका केही नेताहरुले एकता नचाहेको कुरा त पटकपटक सार्वजनिक हुँदै अाएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ६९ बर्से यात्राः वर्ग सङ्घर्षको दस्ताबेज